Kukangaki sizwa nezihlobo, nabangane banayo ikhanda ngenxa iziphepho magnetic. Yiqiniso, kungenzeka ukuthi ihaba, futhi kubangela Ukuwohloka isimo sempilo yabo zisekelwe okunye. Kodwa baningi ngokuphelele kwesokudla: umuntu njalo ngaphansi kwethonya umsebenzi solar, okuyinto kungaba nomthelela empilweni. Yingakho lokhu okwenzekayo, sizozama ukukutshela.
Ilanga ingafaniswa elikhulu iArmagedoni ophendulayo. Incredible umthamo izinqubo ezenzeka ngezikhathi ukuqhuma kwenzeka ekuthuthukiseni umsebenzi solar emisebeni. Ukudubula ngokuthi ama-solar, futhi ukuqhubeka inqubo - "iziphepho elanga".
Kwaphela isikhathi eside, ososayensi babekholelwa ukuthi ilanga likhipha ukukhanya ebonakalayo nengabonakali kuphela. Kodwa-ke kwatholakala ukuthi kukhona izinhlayiya ukuthi baphathe amacala kagesi e emisebeni. Lezi zinhlayiya shabalala kusukela ngesikhathi ilanga umkhathi, ngokuba phambili lo corona welanga. iyakhula futhi asikaze solar emisebeni inzuzo amaphuzu womsebenzi. Ngezinye lezi zikhathi zokuthinteka emkhathini solar uyakhishwa emkhathini interplanetary electron enamandla futhi proton ukugeleza, ne-helium nuclei. Notshwala abe namandla amakhulu ngejubane. Bagcwalisa isikhala lonke sonozungezilanga futhi ibizwa ngokuthi ama-solar wind. Kwesinye isikhathi abantu esikhundleni igama owamukelwa "ama-solar wind" ngesikhathi wokugaklazeka - "iziphepho elanga". It kuvela ukuthi flash ku ezikude ilanga ithonya kuphi ohlelweni lwethu kwamaplanethi, kuhlanganise i-Earth.
Impendulo kazibuthe omhlaba
ivikela Amandla kazibuthe omhlaba iplanethi kusukela solar umoya ukugeleza. Kodwa iziphepho elanga acindezele Magnetosphere, wabangela ukuba shwabanisa. Lokhu kwandisa kakhulu amandla kazibuthe amakhulu, okuholela ushintsho impahla yayo. Impendulo Umhlaba ukwandisa umsebenzi Sun, okungukuthi, flash iba iziphepho geomagnetic. Lezi zinqubo ezibhekwa ekuhloleni nokwakheka nokuxhumana of the Earth ilanga. Ososayensi baze bacule ezothatha ihlandla ekhethekile "isikhala sezulu." A amandla iziphepho ukuchaza indices DST kanye KP. Ngaphansi kwethonya kunazozonke perturbation we kazibuthe kukhona zindawo maphakathi kanye engezansi Earth. Eduzane yenkabazwe, umthelela iziphepho geomagnetic babe ngaphansi.
Iyiphi inkathi yesikhathi kusukela ukuvuleka ukuze isivunguvungu geomagnetic?
isivunguvungu elanga, ehlanganisa izinhlayiya ephezulu ijubane ageleza ukufinyelela amahora 12-24 Emhlabeni orbit. oscillations Magnetic Ungaqhubeka kusukela amahora ambalwa kuya ezinsukwini ezimbalwa. Yonke inqubo ibizwa ngokuthi izwe isiphepho kazibuthe. Evamile ukuphazamiseka geomagnetic ihlukaniswe izigaba eziningana:
Esigabeni sokuqala. Inkathi nethonya elikhulu umuntu, lapho kutholakala amandla kazibuthe ingcindezi iyakhula. isigaba obuphelele - amahora angaba ngu-4-6, bese emkhakheni ebuyiselwa esimeni esejwayelekile.
Isigaba esiyinhloko. Ngemva kokuphela esigabeni sokuqala izimvula eziyingozi kazibuthe omhlaba ngesikhathi ukwehlisa amandla kazibuthe planethi. isigaba isikhathi - amahora 10 kuya ku-15 (futhi ngezinye izikhathi ezingaphezu).
isigaba bokubuyisana. Phakathi nale nkathi, igobolondo kazibuthe ubuyisela ukubaluleka kwemvelo. Kungaba kudonse amahora ambalwa.
Kungenzeka yini ukuba umuntu ongenza isibikezelo
Sekuyisikhathi eside ososayensi abaningi bayiqonda ngokuthi, ngokutadisha iziphepho elanga, isibikezelo akunzima kakhulu ukukwenza. Ukuqaphela Sun namuhla alitholakali nje kuphela nge zokubuka phansi-based, kodwa futhi nge amasayithi ezisemkhathini. Kungenzeka, isibonelo, iziphuphutheki yezinkanyezi. Ngakho, okwashiwo ama-solar coronal mass kwekhabhoni babé olunembile okuningi. Nokho, ososayensi abaningi bakholelwa ukuthi ama-solar nentuthu oyikhiphayo coronal - izinqubo ezahlukene. Futhi ukubikezela izinsuku okungekuhle inkambu eMhlabeni magnetic, kubalulekile ukugxila kwekhabhoni yenhliziyo.
Umthelela on komuntu
oscillation Ephoqelekile yasendle kazibuthe omhlaba Zomhlaba has nomthelela omubi empilweni yomuntu. Futhi ishaya ngaso amaphuzu yibona abasengozini enkulu. Omunye wabantu bokuqala yabhekisela ukuhlanganisa womsebenzi elanga futhi exacerbation (nesenzakalo) izifo Soviet usosayensi biophysicist LA Chizhevsky. Nguye owaqala isifundo yethonya iziphepho magnetic isimo ngokomzimba futhi psycho-ngokomzwelo umuntu.
Manje luthole ukuthi ezinsukwini enqabayo ngokuyinhloko kuthinta izitsha inhliziyo negazi. Kubonakala arrhythmia futhi tachycardia. Ugxumela blood pressure zenzeka njalo, ukwandisa IRR inkulumo. Abaningi yashubisa izinqubo eziningi ezingapheli. migraines njalo nokucindezeleka. I ezingemnandi neze - lokho ukufihla futhi bazivikele ngalesi sikhathi akunakwenzeka. Izinqubo elibangela umsebenzi solar (iziphepho magnetic), ezithinta zonke izingxenye Earth, nakuba kuthinteka ne inamazinga ahlukahlukene okujula obuhlukahlukene: eduze izingongolo - esiphezulu enkabazwe - omncane. Kodwa is wafakazela ukuthi kukhona iphuzu lapho kukhona esikhathini iziphepho magnetic kuyingozi ikakhulukazi.
Nethonya elikhulu kakhulu abantu nenhlalakahle phakathi thuthuva kazibuthe omhlaba wazizwa kulezi zimo ezilandelayo:
Uma umuntu enza indiza. Ngesikhathi ukuphakama ungqimba emoyeni ukuvikela ababuthaka. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yobunzima ukugxilisa ingqondo nokukhumbula ukuhlakazwa ukunakwa ngalesi sikhathi sokusaphazeka maningi amathuba okuthi kwenzeke.
Isikhala sezulu kunomthelela namandla phezu inhlalakahle abakhileyo ezisenyakatho, ikakhulukazi ezindaweni ezingasemifuleni parallel 60.
Thuthukisa umphumela emibi kazibuthe perturbation ongaphakeme-imvamisa kazibuthe imihubhe iziteshi ngomshoshaphansi.
Ukufunda izibikezelo isikhala sezulu, abantu bangakwazi ukuhlela isimiso sakho ukuze singathwesi Ihambe ezindaweni eziyingozi ezinkathini okungekuhle.
Abantu pretty masinyane uyazi abadalwe ngayo esikhathini yomsebenzi solar. Ukuze unciphise imiphumela, kufanele zifunde ukulandela imithetho embalwa:
Musa athambise utshwala emzimbeni futhi i-nicotine ngesikhathi iziphepho elanga.
Gwema ukuvivinya umzimba ngamandla.
Gcina amanye emithi ebalulekile. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi senhliziyo nomfutho wegazi ophezulu.
Zama ukuthi udla, udle lapho kuneziphepho kazibuthe izinhlanzi okwengeziwe, imifino kanye nokusanhlamvu.
Yidla ezikhishwe apholisayo izitshalo, uma zihlale zikhathazekile nokuqwasha. Geza ngamanzi opholile ngamakhambi kanye amafutha abalulekile.
Uma lezi zinyathelo azanele, xhumana iseluleko udokotela.
Ngaphansi kwethonya kungumuntu kuphela?
Maye, kodwa izinguquko emkhakheni kazibuthe omhlaba ngesikhathi iziphepho elanga ke usabela hhayi kuphela abantu, kodwa futhi kagesi nekhompyutha zobunjiniyela. Kulezi zikhathi, ngocingo eziwohlokayo kungenzeka ukuvala uhlelo lokuhamba, ukwehluleka mobile phones, amaphilisi kanye computer, kukhona ukwehluleka transformers. Ngaphezu kwalokho, kukhona ukwehluleka iziphuphutheki. Njengoba zonke lezi zenzakalo kungathinta izinga yomuntu yokuphila, bese uba efanele ikakhulukazi ezimweni ezithile ngisho owabeka ingozi yakhe efayo, isibikezelo nokutadisha umsebenzi solar.
Eziqine isivunguvungu elanga
Ngo-1859, i-Sun uthwebule superflare okubangelwa eqinile isivunguvungu elanga. Ukuqaphelisisa nokusebenzisa incazelo lomkhuba wafunda sezinkanyezi R. Carrington. Khona-ke, ngaphansi kwethonya isivunguvungu elanga wehla izingxenye ezinkulu yocingo amanethiwekhi. Ngemva kwalokho, uchungechunge izifundo kwaqinisekisa nokuthi umphumela "Carrington Izinkundla" (ngakho wabiza lo isivunguvungu geomagnetic) ungqimba lwe-ozone emhlabeni Umhlaba ilimele.
Yini elindele nathi esikhathini esizayo esiseduze
I abaseduze kuthathwa isibikezelo isikhala sezulu ngo-December 2016. Okokuqala isivunguvungu elanga ngoDisemba uzoqala inomboro yesithathu. Kuzoba wamandla nokulinganisela kungathinta isimo esingokomzwelo noma kubangele ukuqwasha.
Kodwa 8,12 Earth bayothola umthelela isiphepho oqinile magnetic. Lena inkathi eyingozi unesifo sikashukela cores. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba ukuhlehlisa indiza.
Ekupheleni kukaDisemba nalo oscillations we kazibuthe. Inqubo uzoqhubeka th 26 kuya 29 ngosuku th. Lokhu isivunguvungu elanga kuyinto Ngokwesilinganiso, Nokho, banikezwe budebuduze ngamaholide, kungaba zibulale abantu ukhathele futhi udakiwe.